ကြိုးခွေသုံးခွေ(သို.)စစ်သား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကြိုးခွေသုံးခွေ(သို.)စစ်သား
Posted by ရွှေဘိုသား on Jun 27, 2011 in Drama, Essays.. | 13 comments
ကျွန်တော်လည်းဒီဆောင်းပါးလေးကို ဒေါက်တာလွမ်းဆွေရဲ.ဆိုဒ်ကနေဖတ်ပြီး ရွာသားတွေကိုဖတ်စေချင်တာရယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတာကြောင်. ကူးယူပြီးတင်ပေးလိုက်တာ
ကျနော် စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ကားရဲ့အမိုးပေါ်မှာ စစ်သား ၃ ယောက်ဟာ စစ်ဝတ်ပစ္စည်း အပြည့်အစုံနှင့် ပါလေ၏။ ခန့်မှန်းကြည့်ရသည်မှာ ခရီးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ကင်းစခန်းတခုကို အင်အားဖြည့် သွားမယ့်ပုံပေါ်၏။ မနိုင်ဝန်ကို ထမ်း ပိုးထားရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ချက်ဗလက်အမျိုးအစား လိုင်းကားလေးရဲ့ ဆူပူညည်း တွားသံကြားက
“၁၀ မိုင်ကုန်းမှာ ဆင်းမယ်ဟေ့” ဆိုတဲ့ အသံလေးက ခပ်ထန်ထန်ထွက်လာ၏။
ကားခတောင်းတာလည်းမမြင်။ ထင်ရှားတာက စပယ်ယာလေးရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ထင်ဟပ်လာတဲ့ မကျေနပ်မှု အသွင် ကိုတော့ လူကဲခတ်ပညာမှာ ဗေဒင်ဆရာတွေလောက် ကျွမ်းကျင်အောင် တတ်မြောက်မထားပေမယ့် ကျနော် ဖတ်ရှု နိုင်ခဲ့သည်။ တဆက်တည်းမှာ…
– ကြိမ်ခွေမချဘဲ ကြိမ်ခွေချမယ်လို့ ကားစပယ်ယာက ဘာကြောင့် အော်ရတာပါလိမ့်…?
– စစ်သားတွေက ဘာကြောင့်ကားခမပေးတာလည်း..?
– ကျသင့်တဲ့ စီနင်းခကို စစ်သားတွေ မပေးရဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်ရှိလေရော့ သလား..?
– ရဲဘော်လေးတွေကလည်း ကျေးဇူးတင်စကားတောင် မပြောတဲ့အပြင် “ရပြီ သွားတော့” လို့ အမိန့်ဆန် ဆန် ခက်ထန်ထန်ပုံစံနဲ့ ဘာကြောင့်ပြောတာပါလိမ့်…! ပြောခွင့်ရော ရှိရဲ့လား ဆိုတာ ကျနော်တွေးရင်း စီးနင်းလိုက်ပါလာ တာ ဂိတ်ဆုံးသာရောက်ရော အဖြေမထွက်ခဲ့။ ကားပေါ်က ကုန်ပစ္စည်းတွေချ ခရီးသည်တွေ ကားခပေးပြီး မိမိတို့ ဦးတည်ရာအရပ်ကို ထွက်ခွာသွားကြလေ၏။
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်.. စပယ်ယာဆိုတော့လည်း ပါးစပ်က တွေ့ရာအော်လိုက်တာပါလို့ …
ဆိုင်ထဲထိုင် လိုအပ်တာမှာပြီး စပယ်ယာလေးက …
ကားစပယ်ယာလေးရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အသံအဆုံးမှာ ကျနော့် ရင်ထဲ ဗုံးကွဲသလို “၀ုန်း” ကနဲ့ ကြားမိတာက…
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့လူမှုနယ်ပယ်တွင် ဖွတ်ဆိုသော သတ္တ၀ါကို ငမွဲ/ငတေ/ကံကြမ္မာဆိုးကို ပေးတတ်တဲ့ လူတွေကို သာ နှိုင်းယှဉ်တင်စားလေ့ရှိသည်။ စစ်သားများကို ထိုကဲ့သို့ ခိုင်းနှိုင်းသုံးစွဲခံရခြင်းသည်။ လူထု၏ရင်ထဲမှာ ချစ်၍လော ချဉ်၍လော… ခွဲခြားနားလည်နိုင်ကြပါစေ။ ဤခံစားမှုစာစုကို ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် အပေါ်အခြေခံပြီးရေးဖွဲ့ပါသည်။ တပ် မှူးကောင်း တပ်သားကောင်းများနဲ့ စစ်တပ်၏ဂုဏ်ကျက်သရေကို ကျဆင်းစေလိုသော ဆန္ဒမြူတမျှင်မျှ မပါဝင် ရပါ ကြောင်းနှင့် မကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ရေးသားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ မူဝါဒ၊ လမ်းစဉ်၊ ကျင့်ထုံးနှင့်အညီ မှန်ကန်သော ရပ်တည်ချက်ဖြင့် ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူလေးစားသော စစ်မှုထမ်းကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရေး ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
စပါယ်ယာက မကြည်သလိုကြည်.နေတဲ.ပုံလေး တစ်ပုံနဲ.တင်ပေးတာ
စစ်သားတွေအတွက် ဘွဲ့ထူးတခုပေါ့ ….
စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင် တွေ သူတို့လက်ချက်နဲ့ ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတာ သိကြပါစေ။
ကိုရွှေ က ရန်ကုန် မှာ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်နေတာပေါ့လေ
ကောင်းပ ဗဟုသုတတကယ်ရပါတယ်။အဲဒါမှ ပြည်သူ.သဘောထားအမှန်ပဲ။
ပြည်သူ့တွေ ပို့သသောမေတ္တာကို ခံယူနေကြတာပဲဟာကို
ကြိမ်ခွေလား၊ ကြိုးခွေလား။ ခေါင်းစဉ်မှာ ကြိုးခွေ ဖြစ်နေတယ်။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ထိမ်းသိမ်းလိုက်တာ ထင်တယ်။
ဘယ်သူလည်းကွ ငါတို့တပ်မတော်ကို မကောင်းပြောတာ။ မသိရင် ငါတို့တပ်မတော် ဆောင်ပုဒ်ကို သေသေချာချာမှတ်ထား…. တပ်မတော်သာငပိ တပ်မတော်သာငပွ (komoethee.blogspot.com မှ)
အခုမှပဲ သိတော့တယ် တပ်မတော်ဆိုတာ ကုန်စုံဆိုင်နာမည်ကြီးကိုး
သူတို့လုပ်တဲ့ လုပ်ရက်နဲ့ ပေးထားတဲ့နာမည်က အစပ်အဟပ်တည့်တာပဲဟာ နာမည်လေးက လှတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရသေးတယ်
ဖွတ်က မှ စားစရာရှိအုံးမယ်
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ….
နေရာတိုင်းမှာ လျို့ဝှက်အချက်ပေးစကားတွေ ကသူတို့အချင်းချင်းပဲသိနိုင်တယ်။